Shiinaha Brass Qaybo warshad iyo saarayaasha | Lead
Haddii aad leedahay qaybo naxaas ah oo loo baahan yahay in la farsameeyo, waxaan nahay mid ka mid ah ilaha ugu kartida badan ee la awoodi karo, shaqadana waan ku qaban karnaa si sax ah.
Hadaad leedahay qaybo naxaas ah Waxaan ubaahanahay in la farsameeyo, waxaan nahay mid ka mid ah ilaha ugu kartida iyo awooda badan, waana ku guuleysan karnaa shaqada si sax ah.
Maxay yihiin saxnaanta naxaasta?
Naxaasku wuxuu ka kooban yahay naxaas iyo dahaadh zinc, wuxuu ka kooban yahay naxaas, zinc waxaa loo yaqaan naxaas caadi ah, haddii ay ka kooban tahay waxyaabo badan oo ka mid ah aalado loo yaqaan naxaas gaar ah.
Waa Maxay Codsiga Naxaasku Inta Badan Loo Adeegsado?
Naxaasku wuxuu leeyahay adeegsi ballaaran, waxaa loo samayn karaa taangiga biyaha, tuubbooyinka bullaacadaha, billadaha, hoos-u-dhigga, tuubbada abeesada, kondenser, qolof iyo qaabab kala duwan oo alaab cas cas leh.
Qaybaha mashiinka naxaasku waxay leeyihiin faa'iidooyin dhowr ah oo muhiim ah marka la barbardhigo qalabaynta qalabka kale. Qaybaha naxaasta loo rogo iyo qaybaha waa kuwo waara, kharash badan, oo xitaa u samee shaabad adag. Intaa waxaa dheer, farsamaynta naxaasta iyo qaybaha leexashada waxay leeyihiin kuleyl aad u sarreeya iyo caabbinta daxalka! Waxaa taas ka sii muhiimsan, qaybaha mashiinka maroojinta maaddada naxaasta ah ee 'Cox Manufacturing' ayaa si fudud loo farsameyn karaa uguna biiri karaa, waxaana lagu sameeyay qeexitaankaaga iyo heerarkaaga!
Codsiyada Mashiinka Naxaas
Mashiinka naxaasta waxaa loo isticmaalaa noocyo badan oo codsiyo iyo warshado isugu jira, oo ay ku jiraan caafimaadka, korontada, tubooyinka, iyo xitaa badeecadaha macaamiisha. Shirkaduhu waxay door bidaan qaybo yaryar iyo naxaas loo rogay maxaa yeelay waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu fudud ee lagu farsameeyo mashiinka, waa mid qiimo jaban, aadna u adkeysi badan. Qalabka naxaasta ee mashiinka lagu sameeyo waxaa badanaa loo isticmaalaa qalabka elektaroonigga ah sababtoo ah xooggiisa hoose iyo miisaankiisa. Codsiyada mashiinnada naxaasta ah oo dheeri ah waxaa ka mid ah injineernimada, tuubbada, iyo shaqada uumiga maxaa yeelay qalabka naxaasta ee mashiinnada lagu dhejiyo waxay leeyihiin isku dheelitirnaan hooseeya iyo sifooyin u adkaysta daxalka. Soo-saarista Cox waxay fahamsan tahay dhammaan warshadaha iyo tilmaamaha dalabka iyo heerarka, waana sababta aan u nahay soo saaraha qeybaha naxaasta ugu sarreeya.
Qaybo ka mid ah naxaas Mashiinka Guud
Fit rakibida tuuboyinka
Fit Rakibid Xadhig
Fit Rakibista Xirmooyinka
Fit Rakiban Bulkhead
● rakiban Swivel
● Xirmooyinka Grunner
M Gooryaanka Gears
Rif Cadaadiska Cadaadiska
● Iyo qaybo badan oo naxaas ah
Hore: CNC leexinta
Xiga: Qaybaha Birta